Haddaan noolaado! W.Q: Barkhad M. Kaariye | Somaliland.Org
December 30, 2012	Qof waliba degdeggiisa wuxuu u egyahay mid ku socda ballan uu ka habsaamay ama shaqo laga sugayo. Dadku waxay u wada muuqdaan kuwo igu cusub, marka laga reebo dad tiro yar oo markay iga hor yimaaddaan aanu is-weji garanayno ama is-magac-dhebi karno. Sababtoo ah, halka aanu joognaa maaha dalkii hooyo ee waa qurbe. Aniga oo baalla-daymoonaya, ayaan maqlay dhawaaq ii yeedhaya, “Barkhadoow, waryaa Barkhad!” Maskaxdayda oo markaa ku maqnayd dhugashada dadka iyo deegaanka kala duwan, ayaan garan kari waayay halka dhawaaqu ka baxay. Mar dambese, ayaan gartay in dhinacayga dambe layga yeedhay, markii aan ku jeestayna arki waayay qof aan garto oo ii yeedhay. Haddiiba aan iska jeestay oo aan mar kale ku mashquulay wixii markii hore maskaxdayda iyo indhuhuba ku maqnaayeen, haddana mar kale ayaan maqlay dhawaaqii! Jalleeco labaad baan ku celiyay dhinacayga dambe, mise waa wiil yar oo dhalinyaro ah oo aanan hore u arag!.
Laba maalmood ka dib, aniga oo meel makhaayad ah oo jid dhinaceed ah fadhiya, ayaan halacsaday qof halkeer taagan. Waa Axmed oo la taagan nin qiyaasihii 40-jir ah iyo saddex caruur ah. Ma garanayo waxay isku ahaayeen, balse waxa ka muuqday xiise ay isu-qabaan. “Walaalo nabadgelyo oo aynu iska war hayno!” ayaan maqlay. Inta aan kacay, ayaan ku dhawaaday. Inta uu Axmed saddexdii caruurta ahaa u fadhiistay, si ay isu-dherer le’ekaadaan, ayuu laabta ku qabtay, wuxuu ku leeyahay ereyo maankayga damqay. “Walaalo caawa ayaan baxayaa, ma ogi waxaan la kulmi doono, laakiin haddii aan noolaado waan idinla soo hadlayaa!!” ilmo aanan indhahayga ku ogayn ayaan arkay oo dhabanayda dareeraysa. Waxaan doonay in aan la hadlo, laakiin intaan ereyadiisa qiimayntoodii ku mashquulsanaa, ayuu I dhaafay oo waan arki waayay meel uu u dhaqaaqay. Axmed imika ma ogi meel uu ku sugan yahay, kamana helin wax xog ah.
Previous PostHambalyo Meher WacanNext PostShirkadda SOM EVENTS oo shahaado-sharaf ku muteysatay Kaalintii ay ka Qaadatay Shirweynihii SONYO	Blog